Malunga nathi - Shanghai Langyi esebenzayo Materials Co., Ltd.
Shanghai langyi izinto ezisebenzayo Co., Ltd. yasekwa ngo-2010, egxile ekuboneleleni ngezisombululo additives ezizodwa ezisebenzayo izinto Polyer-based Ester, kwaye ngokuqhubekayo ngokubonelela ngeenkonzo ubomi-umjikelo umahluko ubomi kubathengi chain kushishino Polyer ester-based.
U-Langyi uthatha "ubugcisa bokuyila" njengesiseko sophuhliso lweshishini, ukukhuthaza iindlela ezininzi zokuziphatha eziwela ubuchule. Kunye neeyunivesithi ezaziwayo njengeyunivesithi yaseFudan kunye neyunivesithi yase-donghua, ngaphezulu kwe-10% yengeniso yonyaka ye-langyi ityalwe kuphando kunye nophuhliso ukwakha iqela le-R & D eliqinileyo, ngaphezulu kwamalungu angama-85% anezidanga zokuqala okanye ngaphezulu. Ngaphaya koko, ngaphezulu kwama-80% amalungu e-R & D angundoqo anezifundo zobugqirha okanye ze-master. Inkampani inamalungelo awodwa omenzi wechiza ogunyazisiweyo ali-11, kwaye ifaka isicelo samalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwama-20.
Iimveliso zethu ikakhulu zibandakanya uthotho lwe-5: i-HyMax® CA yokusingqongileyo-enobungane be-carbodiimide ehambisa amanzi ngokudibanisa iiarhente, iiHyMax® inoveli ezichasene ne-hydrolysis additives, AntibacMaxTM Izinto ezingaphiliyo zentsimbi ion antibacterial kunye ne-anti-virus additives, AntibariMaxTM Izixhobo zokuthintela infrared, AntistaMaxTM izongezo ezisebenza ixesha elide.
UKUBONELELA NGOKUSETYENZISWA KWEZISOMBULULO KWAMAQESHANA AMASHISHINI NGENKQUBO EYODWA YOKUSEBENZA NOKUKHUTHAZA UKUVUMELANA KOLUNTU NENKQUBELA YOKUPHILA KWABANTU
Ishishini elitsha eliphezulu lobuchwephesha
Iprojekthi yotshintsho lweZiphumo eziPhezulu zeShanghai
Iiprojekthi ezili-100 eziphezulu zeShanghai zotshintsho lweMpumelelo eNtsha kunye nePhakamileyo yeTekhnoloji
Ishishini eliphambili laseShanghai
I-Shanghai iqhubele phambili ishishini labucala
Iqela eligqwesileyo kwiSithili saseSongjiang
Ishishini lokubonisa iPatent yeSithili saseSongjiang
Ibhaso lesithathu lokuqhubela phambili kweNzululwazi neTekhnoloji yeSithili saseSongjiang, eShanghai
Kuthe kwaqwalaselwa kwakhona indlela ebomvu yomkhosi-iHolo yeNguquko yeSikhumbuzo
Ukwakhiwa kweqela elwandle eliseQingdao
Zimasa uMboniso we-2019 eJamani
Zimasa umboniso wepeyinti ka-2019
Antibacterial ingubo ephothiweyo, Antibacterial Electret Masterbatch, Intambo ye-Antibacterial, Antibacterial Masterbatch, I-Masterbatch ye-Antibacterial Melt-Blown Masterbatch, Ummeli wePolymeric Antihydrolysis,